bhimphoto: January 2015
'क्या बात करते हो साब !' बेलुकीको करीब ८ बजेको हुँदो हो । ऊ केही रिसाए झै देखियो । भारतको राजस्थानमा करणीमाता मन्दिर पुगेर बिकानेरको गंगाशहरतर्फ फिर्दै गर्दाको अवस्था थियो त्यो । मन्दिरभरि मुसा थिए । अनौठो संस्कारले जोगाएर राखेपछि तिनैका कारण ख्याति आर्जेको तीर्थस्थल । ३२ किलोमिटरको दूरि । बाटोमा दुइ ठाउँ गाडीले किचेर स्याल मरेको देखेपछि हाम्रो जीपका चालकलाई मैले सोधेको थिए -'तिम्रो गाडीले पनि यसरी स्याल किचेको छ ?' सोधाइले उनी खुसी भएनन् । अलि रिसाएजस्तो गरे । भने 'हमारे यहाँ का जंगल का कानुन आप को पता नही । सरजी सलमान खान अबतक जोधपुर कोर्ट का चक्कर काट रहा है ।' गाडी चलाउँदा निकै होसियार रहनुपर्ने उनले सुनाए ।
कतै जनावर किचिएर मरेको वनकर्मीले थाहा पाए भने लाग्ने मुद्दा झन्झटिलो हुने उनको भनाइ थियो । त्यसैले वन्यजन्तु आवागमन हुने बाटोमा चालकले निकै चनाखो हुनुपर्ने प्रष्टीकरण उनले दिए । गत वर्षको हिउँद महिनाको कुरा थियो यो । त्यो रात मैले वास बस्ने ठाउँमा फर्केर बलिवुड कलाकार खानविरुद्धको मुद्दा के रहेछ भनेर गुगलमा सर्च गरि देखाएका लिंक हेरें । सन् १९९८ मा 'हम साथ साथ है' भन्ने चलचित्रको राजस्थानमा छायांकनका दौरान खानले दुइवटा चिंकारा भन्ने हरिण प्रजातिको जन्तु मारेको भन्ने मुद्दा रहेछ । चिंकारा, हामीकहाँ बर्दियाको खैरापुरामा पाइने कृष्णसारसँग मिल्दोजुल्दो प्रजातिको शाकाहारी जीव हो । भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्थानका सुख्खा इलाकामा पाइने यो जन्तु राजस्थानका विस्नोइ समुदायको धार्मिक आस्थासँग जोडिएको रहेछ । सिकार गर्ने खानका विरुद्ध त्यही समुदायले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि वन्यजन्तु अवैध सिकारको मुद्दा चलेको रहेछ । वन्यजन्तु संरक्षणका लागि बनाइएका कडा कानुनबाट बलिवुड नायकले लामो समय हैरानी पाएका समाचार अझै पनि सञ्चारमाध्यममा आउँछन् ।
गत महिना धनुषाको वीरेन्द्रबजारबाट इटहरीसम्म बेलुकीको यात्रा गर्दा बाटामा धेरै ठाउँ त्यसरी नै स्याल मरेको देखेपछि मैले जीप चालकलाई त्यही प्रश्न सोधेको थिएँ । उनको भावमा खासै परिवर्तन देखिएन । 'बाटामा आए मर्छन् । हाम्रोमा के सुनुवाइ छ र', उनले भनेका थिए, 'यो कुकुरजस्तै त हो । धेरै सडकमा मरेका देखिन्छन् ।' उनको उत्तरपछि मैले राजमार्गको यात्रा गर्दा विचार गरिरहेको छु- पूर्वमा कतै पनि सडकमा 'जनावर निस्कन सक्छन् । तीव्र गतिमा गाडी नकुदाउँ भन्ने सूचना छैन । वन्यजन्तु आउजाउ गर्ने बाटामा यस्तो राख्न कसले कसलाई सिकाउनु पर्ने हो ? के हामी आफ्नै बाटामा हिड्छौ ? त्यो बाटो वन्यजन्तुका लागि पनि होइनन् ? उनीहरू हिड्ने बाटो हामीले मिचेका छैनौ ?
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको वरण्डाभार जंगल क्षेत्रमा गत असोज अन्तिम साता गाडीको ठक्करबाट एउटा भाले चितुवा मारियो । सशस्त्र वन रक्षक तालिम केन्द्र टिकौलीका अनुसार राजमार्गमा पर्ने यो क्षेत्रमा यसअघि गत जेठमा गाडीकै ठक्करबाट चारवटा हरिण मारिएका थिए । यस्तै गत मंसिर तेस्रो साता पर्वत सदरमुकाम कुश्माबजार नजिकै शिवालय-९ को चिलाउने चौतारामा बसको ठक्करबाट एउटा चितुवा मारियो ।
पुस तेस्रो साता अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क-१० किमडाँडामा गाउँलेले एउटा चितुवालाई कुटेर मारे । घरपालुवा पशु र मान्छेकै लागि खतरा भएकाले त्यसलाई मारेको गाउँलेको भनाइ थियो । बस्तीमा पसेर घरपालुवा जन्तुसँगै मान्छेमाथि पनि आक्रमण गर्ने घटनामा चितुवाजस्ता मांसाहारी जनावर मारिएका घटना नौला हुन छाडेका छन् । सुदुर पश्चिमका केही जिल्लामा यस्ता जन्तुको निकै आतंक रहेको खबर सञ्चारमाध्यममा बराबर आउँछन् । यथार्थ तीतो छ तर, खान नपाएपछि नै उनीहरू मान्छेका बस्ती पस्ने हुन् । जंगलमै आहारा यथेष्ठ भएपनि बस्तीमा आए भने ती अपवाद हुन् । धेरै ठाउँ जंगलको आकार घट्दो मात्र छैन, जन्तुकै अस्तित्व संकटमा छ । कतै कतै बस्तीनजिक सामुदायिक वन हुर्काएकाहरूलाई पनि सास्ती बढेकै छ । आफ्नो पुरानो विचरणका क्षेत्रमा आहाराको कमी, अन्न-घरपालुवाको स्वादको रन्को र सिकारीका कारणहरूले वन्यजन्तुलाई बाहिर ल्याउँछन् ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 5:55 PM
नाजुक अवस्थामा रहेकाहरूका लागि झट्ट केही गर्न सकिएन भने पनि २/४ रूपैयाँ सहयोगका लागि जोसुकैका हात अघि बढ्छन् । समाज दयालु रहेको परीक्षा लिन घर-घर, सडक र धार्मिक आस्थाका केन्द्र आसपास हात फैलाएर बसेकाहरू देख्नु किन नौलो हुन्थ्यो ।
संवाददाता पुगेको पूर्वी मोरङको इटहरा सिक्किमे टोलको एउटा घरका सदस्य भने यसरी परीक्षा लिन सडक र चोकमा बसेकाहरू परेनन् । ६७ वर्षीय तुलसीराम र ४७ वर्षीया सिर्जना ढुंगानाका पाँच सन्तान सुस्तमनस्थितिका छन् । तीन छोरी, दुइ छोराको बढ्दो उमेरसँगै यी दम्पतिलाई सधैंको चिन्ता छ - 'आफूहरूलाई केही भइगए यिनको हालत के होला ?'
३६ वर्षीया निर्मला, ३४ को निर्मल, २३ को उमेश, २२ की पार्वता र २० की गोमा सबका सब आफूबारे बताउन नसक्ने छन् । देव्रे खुट्टामा चोट लागेपछि शल्यक्रियापछि हाल हिडडुल गर्न नसक्ने भएका तुलसीरामले भने 'मलाई सुगर छ । त्यहीँमाथि यस्तो चोट लाग्यो ।' उनका दुइ श्रीमतिबाट आठ सन्तान छन् । जेठीको देहान्तपछि साली सिर्जनालाई भित्र्याएका तुलसीरामका सग्ला-सबल तीन छोरीहरूले आफ्नो घरजम गरेर दर्गदिशा लागिसकेका छन् ।
उनलाई महिनावारीमा अलि बढि रगत जान थाल्यो । तल्लो पेट धेरै नै दुख्न थालेपछि अस्पताल पुगेर जँचाइन । डाक्टरले औषधि लेखिदिए । खाँदै थिइन् दुख्न छाडेन । डाक्टरले अपरेसन गरेपछि मात्रै विसेक हुने बताएका थिए ।
धेरै दुख्न थालेर घरका कामकाज नै गर्न नसक्ने भएपछि मोरङको झुर्किया गाविस-७ का उदीचन्द साह र उनकी पत्नी तेतरीदेवीले सल्लाह गरे-'अब जे भएपनि अपरेसन गर्ने । यो दुखाइको निदान त्यही हो ।' खर्च थिएन । आफूले खानका कमाउने ऐलानी जमिन बेचे । २० हजार हात पर्‍यो । त्यही बोकेर साह दम्पति विराटनगर आइपुगे ।
गत साता यी दम्पतिलाई अस्पतालमा भेटियो । डाक्टर वालकृष्णले फोन गेरपछि म उनीहरूसँग कुरा गर्न त्यहाँ पुगेको थिएँ । एउटा निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, केही मनकारीहरूले साह दम्पतिलाई सघाएको बुझियो । आज एक सातापछि उनीहरूका कुरा ब्लगमा राख्दैछु । केही कारणहरू छन् । हाम्रा 'सेल्फ सेन्सरवाला' दिमागलाई के लाग्छ भने-'कतै यो बिज्ञापन त होइन ? के भर ?' तर, ब्लगमा राखिएको डा. साह र उनको टिमलाई यस्ता विपन्नको सहयोग गर्ने जाँगर नघटोस् भनेरै हो । अर्थोक क्यै हैन ।
यी बुढाबुढीका अवस्थाका कुरा आफ्ना खाले छन् । तर, उनी निको हुने चरणमा थिइन् । अगाडिका कुरा यस्ता थिए ।
कोसीअञ्चल अस्पतालले तेतरीदेवीको पाठेघरमा पलाएको मासू काटेर फाल्न तीन महिनाअघि पालो नआउने जनाउ दियो । निजी अस्पतालको शुल्क महंगो । तैपनि दुवै सहकारी अस्पतालमा पुगे । शुक्रवार उनको शल्यक्रियाअघि डाक्टरसँग केहीबेर कुराकानीको समय मिल्यो । उनले डा. बालकृष्ण साहलाई सोधिन् 'यो अपरेसनपछि म कहिले घरभन्दा गर्न सक्ने हुन्छु -' जवाफमा डाक्टरले उनको घर र अवस्थाका बारेमा सोधे । कृषि पेशामा अडिएका दम्पति । अर्काको खेतमा जनबनी गरेर बाँचेको थाहा लाग्यो । डाक्टरले अस्पताललाई शुल्कमा केही सहुलियत गरिदिन भने । अस्पतालले लायन्स क्लवलाई खबर गर्‍यो । अन्ततः सबै खर्च छुट गरेर उपचारको प्रबन्ध मिल्यो ।
साह दम्पतिका दइ सन्तानमा छोरी बिहे भएर गइन् । छोरा पनि बिवाहपछि रंगेलीस्थित ससुरालीमै बस्छन् । 'मैले छोरालाई आमाको अवस्थाबारे फोन गरेको थिए“', शनिवार अस्पतालमा श्रीमतिलाई खाना खुवाउँदै गरेको भेटिएका उदीचन्दले भने, 'उसले भन्यो जेसुकै होस् आमा मरेपछिमात्रै घर आउछु ।' उदीचन्दका आ“खा रसाएका थिए । उनले भने 'सन्तान हुनुमात्रै ठूलो कुरा होइन रहेछ । आपतका बेला आमाबुवालाई साथ दिने भए पो सन्तान हुनुको पनि अर्थ रहन्छ ।'
शुक्रवारको शल्यक्रिया सफल रहेको डा. बालकृष्णले बताए । उनले भने 'अवस्था राम्रो छ । छिटै तेतरीदेवी घर जान सक्छिन् ।' शल्यक्रियाअघि भएको सामान्य कुराकानीले साह दम्पतिका लागि करीव ३५ हजार बराबरको उपचारमा छुट दिलाउन सक्दा उनी पनि हषिर्त छन् । उनले भने 'विरामीले आफ्नो बारेमा बताउन पाएभने हामी जसले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । यी दम्पतिको लागि राम्रो संयोग रह्यो ।'
सोमबार घर जाने तयारीमा रहेकी तेतरीदेवीले अस्पतालको शैय्याबाटै भनिन् 'दुःखीका लागि कतै न कतै सहयोगी भेटिने रहेछन् ।' उनका लागि अस्पतालका निर्देशक विकास अधिकारीले उपचार खर्च, लीला ढुंगेलले औषधि र अजिता वरालले खाना र फलफूल खर्च दिएका छन् । उदीचन्दले अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाएका छन् ।
ब्लगमा यो फीचर अपलोड गर्दागर्दै के भनौं भने आज मेरो मेल बक्समा डा. अरुणा उप्रेतीको इमेल रहेछ । 'यो विषय आफूले पनि लेख्न चाहिरहेको भएपनि तपाइले छिटो लेख्नु भएछ । खुसी लाग्यो । यस्तो अप्ठ्यारोमा परेका महिलालाई सहयोग गर्नुहोला' भनेर । मलाई खुसी लाग्यो । उत्तर पनि पठाएँ । नेपाली छापामा हामी डा. उप्रेतीका लेख पढन पाइरहन्छौ । स्वास्थ्यका बारेमा पत्रकारले लेक्न सजिलो छैन । कारण, यो पर्‍यो प्राविधिक विषय । र, यो कसरी लेखियो भन्ने थोरै कुरा भन्छु ।
मैले नूर इमेजेजको टोलीसँगको यात्राका कुरा यही ब्लगमा केहीअघि गरेको थिएँ । यो त्यही यात्राकै बेला खिचेका टिपेका मान्छेका कथा व्यथा हुन् । विदेशीले अडियो। भिडियो र फोटोमा लगेका मान्छेका कथा हामीले पनि बुझनु पर्छ भन्ने डा. मोहनजीका कुरा उचित लागेको हो । खासमा फिस्टुलाको उपचार राजधानीको पाटन र धरानको विपी प्रतिष्ठानमा सहज छ । यी दुवै सरकारी अस्पताल हुन् । उपचारमा लाग्ने खर्च छुट दिएर थालिएको सेवा लामो अवधि चल्छ भन्ने ग्यारेन्टी भएको कुरा होइन । तर, यो सुविधा जबसम्म छ, तबसम्म विरामीले थाहा पाएर पुग्नु/पुर्‍याइनु पर्छ । सेवा पाउनु पर्छ । यस्ता कथा नियोजित/प्रायोजित हुने गरेकाले प्रकाशित हुन गाह्रो छ । अझ मोफसलबाट लेखिएका यस्ता सामाग्रीमाथि डेस्कले धेरै प्रश्न गर्छ । नियमित समाचार सामाग्रीका रुपमा पठाइयो भने सोधिन्छ -'कुनै फेलोसीप पाएर लेखेको हो ? किन कुन संस्थाका लागि लेखेको ?' भाग्यमानी सम्झन पर्छ, मैले यस्ता प्रश्नको सामना गर्न परेन । कारण कोसेली संयोजक साथी यज्ञशजीलाई विषयबारे लेख्न थाल्नअघि नै बताएको थिएँ । यो कुनै संस्था वा कसैको फेलोसीपका लागि लेखिएको होइन । मबाट वातावरण, चरा र वन्यजीवनमा आधारीत सामाग्री आउनु पर्छ भनेर हौस्याउने उहाँले 'हुन्छ लेख्नुस्' भनेपछि पनि केही समय लगाएर लेखियो ।
फिस्टुलासँग स्वार्थ केही छैन । तर, यो रोगले च्यापेपछि कष्ट खेपेकाहरू भेटेपछि लाग्छ- 'यो कसैलाई नहोस् ।' करीब एक साताको यात्रा, भेटिएका दुःखी तर, संघर्षपूर्ण जीवन बाँचेका महिलाका कुरा समेट्न मन लागेको हो । यसमा केही पर्तिनिधि पात्रकामात्रै कथा समेटिएका छन् । लागेको छ, यी केही पात्रले यो रोगले दुःख दिँदा पाइने कष्टसँग जुध्दै जिन्दगीको गाडी डोर्‍याउनेहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । अझै हामीले यस्ता कुरा खोज्नै सकेका छैनौ । महिला वालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र समाजिक सरोकारका विषयमा धेरैथोक खोज्नै पर्छ । यो क्रम जारी रहनेछ ।
तल २०७१ माघ ३ शनिवार कान्तिपुर कोसेलीको मध्यपृष्ठमा प्रकाशित 'फिस्टुला जिन्दगी' छ । अनलाइनमा राखिएको सामाग्री कपी गर्दा फन्टको साइज र स्पेसिङ मिलाउन सकिएन । त्यसैले मैले सुरूमा कोसेलीलाई पठाएको मुलकपीबाट राखेको छु । प्रकाशित हुँदा यसमा केही हरफहरू काँटछाट गरि सम्पादन भएका छन् । अप्रासंगिक, वा एउटै कुरा दोहोरिएको, वा अनावश्यक लागेर हुन सक्छ । मिलाएर बुझम् ।
कर्जन्हा र किरतपुरबीच कमला नदि छ । पानी घटेकाबेला यी गाउँका मान्छे वर्षा केही महिना ओहरदोहर गर्छन् । उनी माइती गएकी थिइन । कमला नदिमा पानी निकै थियो । उनलाई भेट्न पुलपारी भएर करीव २२ किलोमिटर कच्ची बाटो यात्रा गर्नुपर्ने भयो । हामी किरतपुरतिर लाग्यौं । करीव दुइ किलोमिटर वरदेखि गाडी अघि बढ्न सकेन । बाटामा ठूल्ठूला खाल्डा थिए । चोकमा सुनीताकी आमा चोकमा प्याजी-भुजा बेच्न बसेकी थिइन । अपांग बाबु शिवा महतो अर्काको खेतमा काम गरेर र्फकदै थिए । बाटाको गाइड बनेका उनले भने 'ठूलीछोरी । छिटै बिहे गरिदियौं । जनकपुर लानुपर्दा पर्दा चार गाउँ डुलेर चन्दा खोजेर लगेका थियौं ।'
'हाम्रो ध्यान मातृ मृत्यु दर घटाउने हो भने फिस्टुलाको समस्यामाथि गम्भिररूपमा ध्यान जानैपर्ने देख्छु' धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्त्री तथा प्रसुती रोग विभागका संयोजक एसोसिएट प्रोफेसर डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने 'धेरैपछि अब आएर बल्ल यो समस्या निदानका लागि काम सुरू भएको छ ।' पाठेघर खस्ने समस्याबारे अहिले धेरै जानकारी बढेको भएपनि फिस्टुलाबारे प्रचार निकै कम रहेको उनले बताए ।